July 2015 - Technology Khabar
Monthly Archives: १५ श्रावण २०७२, शुक्रबार १३:३५
१५ श्रावण २०७२, शुक्रबार १३:३५	Comments Off on सामसुंगको ग्यालेक्सी एस सिक्स एज प्लस आउँदै, मूल्य ८०० यूरो
काठमाडौं, १५ साउन ।पछिल्लो समय चर्चाको शिखरमा रहेको सामसुंगको ग्यालेक्सी एस सिक्स एज प्लस (Galaxy S6 Edge+) स्मार्टफोनको बारेमा विभिन्न समाचारहरु आई नै रहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ग्यालेक्सी एस सिक्स एजको मूल्यको बारेमा पनि समाचार सार्वजनिक भएको छ । टेक साइट साम मोबाइलका अनुसार सामसुंग ग्यालेक्सी एस सिक्स एज प्लसको मूल्य ७९९.९९ यूरो अर्थात ८७६ अमेरिकी डलर (करिब ८९ ...
१५ श्रावण २०७२, शुक्रबार १३:०८	Comments Off on डेलको नयाँ ट्याबलेट भारतीय बजारमा
काठमाडौं, १५ साउन । डेल कम्पनीले भारतीय बजारमा नयाँ ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले थ्रीजी तथा भ्वाइस कलिंग फीचर्स भएको डेल भेन्यू ७ ३७४१ (Dell Venue73741) ट्याबलेट सार्वजनिक गरेको हो । यो ट्याब इन्टेलको एटोम प्रोसेसरमा संचालन हुन्छ । डेल भेन्यू ७ ३७४१ मा ७ इन्चको डिस्प्ले राखिएको छ, जसको रिजोल्यूशन १०२४X६०० पिक्सेल रहेको छ । यसमा ...
१५ श्रावण २०७२, शुक्रबार १२:४८	Comments Off on विण्डोज १० मा आधारित एसरको चारवटा फोनहरु आउँदै
काठमाडौं, १५ साउन । एसरले विण्डोजमा आधारित चारवटा स्मार्टफोनहरु सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एसले यहि वर्ष जर्मनीको बर्लिनमा सेप्टेम्बरमा आयोजना हुने आईएफए २०१५ कन्फ्रेन्समा नयाँ विण्डोज फोनहरु सार्वजनिक गर्न लागेको हो । यसको बारेमा जर्मनको एक वेबसाइट वीनफ्यूचरका सम्पादक रोल्याण्ड क्वान्टले ट्वीटरमार्फत जानकारी दिएका छन् । हालसम्म यो स्मार्टफोनको बारेमा कुनै जानकारीहरु आएका छैनन् । यो स्मार्टफोन वासिंगटनमा ...
१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०७:४४	Comments Off on करिब २ मिटरबाट झर्दा पनि नफुट्ने स्मार्टफोन ‘क्याट एस ४०’
काठमाडौं, १४ साउन । रग्ड फोन स्पेपलिष्ट कम्पनी क्याटले नयाँ स्मार्टफोन क्याट एस ४० को घोषणा गरेको छ । यो स्मार्टफोन निकै कठिन स्थानमा काम गर्नेहरुलाई लक्षित गरेर ल्याईएको हो । यो स्मार्टफोन अहिलेसम्मको सबैभन्दा ससक्त र कडा किसिमको स्मार्टफोन भएको कम्पनीको भनाई छ । यसअघि पनि बजारमा यस्ता जुनसुकै स्थानमा पनि प्रयोग गर्ने किसिमका नटुट्ने र नफुट्ने स्मार्टफोन आईसकेका ...
कोरियाद्धारा भारी उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण
१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०६:३७	Comments Off on कोरियाद्धारा भारी उपकरण नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण
काठमाडौं १४ साउन । गणतन्त्र कोरियाले भूकम्पले भत्काएका भग्नावशेष हटाउन तथा निर्माणमा उपयोगहुने भारी उपकरण (हेभी इक्यूपमेन्ट) नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि कोरियाका राजदूत चो यङ जिनले गृहसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई १६ करोड रुपैयाँ बराबरका २४ वटा उपकरण हस्तान्तरण गरे। सोही कार्यक्रममा कोरियाको विश्व प्रख्यात निर्माण उपकरण उत्पादक कम्पनी दुसान इन्फ्राकोरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जे ...
१४ श्रावण २०७२, बिहीबार ०६:१९	Comments Off on मुलुकभरका सम्पूर्ण चिनी उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, १४ साउन । नेपाल चिनी उद्योग संघले मुलुकभरका सम्पूर्ण चिनी उद्योगहरु बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले बुधबार राजधानीको कृषि उपभोक्ता डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो । संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले सरकारले एकतर्फि रुपमा उखुको मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाउदै एकतर्फि मूल्य निर्धारणका कारण स्वदेशी चिनी उद्योगको टाट पल्टेको र बिदेशी उद्योग फस्टाएको दाबी ...
१३ श्रावण २०७२, बुधबार १३:००	Comments Off on माइक्रोसफ्ट विण्डोज १० सार्वजनिक, निशुल्क डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं, १३ साउन । माइक्रोसफ्टले बुधवार आफ्नो नयाँ अपरेटिंग सिष्टम विण्डोज १० (Windows 10) सार्वजनिक गरेको छ । माइक्रोसफ्टको नयाँ अपरेटिंग सिष्टम विण्डोज १० आजबाट नै निशुल्क डाउनलोड गरेर प्रयोगकर्ताले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीको नयाँ अपरेटिंग सिष्टम करोडौं विण्डोज यूजर्सले डाउनलोड गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो ओएस डाउनलोडका लागि सबैभन्दा पहिलो पर्सनल कम्प्यूटर प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुनेछ । ...
विश्वभरका १० अर्ब एन्ड्रोयड फोन जोखिममा, तपाईँको पनि पर्यो कि ?
१२ श्रावण २०७२, मंगलवार १८:१८	Comments Off on विश्वभरका १० अर्ब एन्ड्रोयड फोन जोखिममा, तपाईँको पनि पर्यो कि ?
काठमाडौं, १३ साउन । के तपाईँ एन्ड्रोयडमा आधारित स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहनुभएको छ ? यदि छ भने तपाईँको स्मार्टफोन जोखिममा रहेको छ । त्यसैले ह्याकरहरुको एमएमएसबाट बच्नुहोस् । अहिले विश्वभरका एन्ड्रोयडमा आधारित करिब १० अर्ब स्मार्टफोनहरु एक एमएमएसको डरका कारण खतरामा परेका छन् । त्यसैमध्ये तपाईँको एन्ड्रोयड अपरेटिंग सिष्टममा आधारित स्मार्टफोन पनि जोखिममा परेको हो । अझ तपाईँको स्मार्टफोनमा कुनै एमएमएस ...
१२ श्रावण २०७२, मंगलवार १७:२०	Comments Off on अक्टा कोर प्रोसेसर भएको बजेट फोन, माइक्रोम्याक्स क्यानभास एक्सप्रेस २
काठमाडौं, १२ साउन । माइक्रोम्याकक्सले आज अक्टा कोर प्रोसेसर यूक्त बजेट स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले विश्व बजारमा क्यानभास एक्सप्रेस २ (Canvas Xpress 2) स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । यो स्मार्टफोनको विशेषता भनेको यसको निकै कम मूल्य हो । यो फोनको मूल्य भारतीय बजारमा ५,९९९ रुपैंया रहेको छ । क्यानभास एक्सप्रेस २ अक्टा कोर प्रोसेसर रहेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा सस्तो ...
१२ श्रावण २०७२, मंगलवार १६:४५	Comments Off on सामसङको नयाँ सोरुम अब कुपण्डोलमा
काठमाडौँ, १२ साउन । हिम इलेक्ट्रोनिक्स् प्रा.लि.ले कुपण्डोल हाईटमा आफ्नो १२औं सोरुम संचालनमा ल्याएको छ । सामसङ्गका उत्पादन प्रति ग्राहकको बढ्दो माग र द स्टेट अफ आर्ट सेल्स काउन्टरले हिम इलेक्ट्रोनिक्स्को हालको नेटवर्कलाई विस्तार गरेको छ । यो सामसङ प्लाजा खुलेसंगै नेपालभरमा सामसङ प्लाजको संख्या १२ वटा पुगेको छ । सामसङ्गका उत्पादन प्रति ग्राहकको बढ्दो मागपूर्तीको लागि हिम इलेक्ट्रोनिक्सले काठमाडौँ ...
इन्टरनेटमा लाग्ने कर तत्काल हटाउन इन्टरनेट सोसाइटीको माग, डिजिटल विभेद बढ्ने चिन्ता https://t.co/SSPpGvficg 10 hours ago
यस्तो छ सामसंग ग्यालेक्सी नोट नाइन, पहिलो पटक लाइभ इमेज ‘लीक’ https://t.co/ojMkg4kbB7 16 hours ago
टम्बो मोबाइल बजारमा आउँदै, २०० दिनसम्मको रिप्लेसमेन्ट वारेन्टि र ३६५ दिनको स्क्रीन रिप्लेसमे https://t.co/LnrYJQsHwN 16 hours ago